Diving, Snorkeling " Journey-Assist Nilomano. Fantsona ratra. Ny tontolon'ny rano ambanin'ny tany.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » Manidina, Snorkeling
Mamonjy sy manafina (snorkeling)
Diving - antsitrika scuba
Fantatrao ve ny atao hoe fisakafoanana lehibe? Amin'ny zava-misy fa isaky ny fotoana, ao anaty rano, ny olona iray dia mahafantatra tsara ny fotoana rehetra sy ny fofonaina rehetra. Ny fihetsehana tsirairay avy dia azo tsapaina amin'ny alàlan'ny fanoherana fehezan-dalàna avo folo heny noho ny rivotra. Tsy fahatsarana io, ary ao anaty rano fotsiny no anisany azy ireo.
more scuba diving, dia mamorona ny fiheverana ny mitsingevana amin'ny lavaka mangitsokitsoka, izay fomba tsara iray hiaina ny fahatsapana sidina malalaka.
Ary ny tena zava-dehibe - ny tontolo anaty rano, toy ny angano tsy mampino, miaraka amin'ireo mponina tsy hay hadinoina sy zavamaniry mahatalanjona, dia tsy mamela olona tsy miraika!
Ao amin'ny haavon-dranomasina ambony, trondro marevaka kely mamontsina amin'ny loko rehetra amin'ny avana. Somary lalindalina kokoa, ny mponina dia efa lehibe kokoa ary mahaliana kokoa hihaona. Eny, tsy mampino fotsiny ny voan-dranomasina misy karazana algala sy corals. Ary eo no misy ny zavamananaina be mpitia indrindra.
Ny mahafaty dia zavatra izay tsy azo ihodivirana ary hanome fahatsapana tsy hay hadinoina sy tsy manam-paharoa tsy hay tohaina!
Ny fitsidihana skuba dia azo zaraina ho vondrona efatra lehibe:
Famandrihana fialam-boly (ho an'ny fialam-boly)
Ny fitsimbina teknika.
Ny fitsidihana matihanina.
Ny fialam-boly fialam-boly (ho an'ny fialam-boly). nilomano
Karazan-tsambo karazana scuba no nidina ho fialan-tsasatra sy fialamboly. Ny fepetra lehibe amin'izany dia fiarovana sy ny fidirana. Ho setriny, ny fisakafoanana fialamboly dia azo zaraina ho fehezanteny maro:
Snorkeling na snorkeling (Schnorchel - fantsom-pisefoana) - Ny karazana antsitrika be mpankafy indrindra sy be mpitia indrindra amin'ireo mpizahatany. Ny mampiavaka azy dia ny filomanosana atao eo ambanin'ny rano miaraka amin'ny sarontava sy fantsom-pisefoana. Ity fitaovana kely ity dia ampy hijerena ny hakanton'ny tontolo anaty rano mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny ezaka kely indrindra. Ny snorkeling dia malaza indrindra any amin'ny firenena tropikaly. Amin'ny maha fitaovana fanampiny anao dia azonao atao ny mampiasa vombony sy lamba fanasana.
Freediving (fisakafoanana malalaka) - fisitrihana scuba miaraka amina fofonaina (apnea). Ny fitaovana fanampiny dia mety vombony, saron-tava, wetsuit, fa azonao atao izany tsy misy izany rehetra izany. Ity karazana fisitrihana scuba ity dia voafetra amin'ny fahafaha-mivelatra manokana ho an'ny faharetan'ny fisefoana, sy ny fahaizana mitsoraka hatramin'ny lalina indrindra. (antsitrika ny record 281m, ary tazomy ny fofonaina mandritra ny 11 min. 35 sec.). Ny mpihazona izao tontolo izao dia manana famaritana lehibe momba ny fahalalahana Natalya Molchanova:
Ny fialam-boly dia milentika ho an'ny fahatsapana. Ao ambadiky ny euphoria amin'ny fiakaran'ny habakabaka. Mandritra ny fotoana mahafinaritra mahafinaritra amin'ny fifaliana amin'ny tontolo ambanin'ny rano, raha mahita azy miaraka amin'ny mason-jazakely madio ao am-ponao ianao dia lasa mahafinaritra sy mitroka ny fony miaraka amin'ny tsiky. Fa mankafy irery, rehefa milamina ny fihavanana anaty dia tsy misy dikany ny eritreritra. Ho an'ny fifaliana, rehefa milentika ny fahasambarana dia mila mifoka rivotra fotsiny ianao, ary mahatsapa ny fahatsapana aina.
Scuba Diving - Fisitrihana scuba mampiasa fitaovana miaina manokana. fanafohezana SCUBA (Fitaovana fofona-drano ao anaty rano), adika sahabo ho “fitaovana ao anaty rano mifono rivotra ao anaty rano". Noho izany, ny fitaovana miaina anaty rano dia manana anarana ankapobeny Ny diving scuba. (ny teny hoe Scuba gear, io dia anarana fotsiny ny orinasa (Aqua Lung) izay mamokatra fitaovana fisitrahana). Ny diving scuba manokatra, mazava ho azy, fahafahana bebe kokoa hahatakatra ny tontolo ambanin'ny rano, satria serivisy scuba, mamela anao hijanona ela kokoa ao anaty rano ary hitsimoka hatrany.
Na mpisitrika matihanina ianao na mafana fo amin'ny snorkelling, dia alao antoka fa hanaraka fitandremana ianao. Aza milentika irery. Aza iharan-doza amin'ny fahasalamanao amin'ny filomanosana amin'ny toerana tsy mety amin'ny fisitrihana. Tandremo ny natiora sy ny tenanao - aza mikasika zavatra ao anaty rano. Tsy misy hetsika tampoka. Miezaha hisoroka ny fiovana lalina.
Toerana mahaliana amin'ny snorkeling
Cayo de Agua, Los Roques, Venezoela - Ny rano turquoise madio indrindra. karazana haran-dranomasina, trondro ary crustacea tsy hita isa.
Temae Beach, Moorea, Polinezia frantsay - nosy mahafinaritra. Rano madio sy tontolo ambanin'ny tany. Ho fanampin'ny snorkeling, ny mpikatroka dia afaka manofa trano fonosana misy gorodona.
Nosy Mnemba Tanzania - atin'ny haran-dranomasina 2 km miala an'i Zanzibar. Rano madio sy fiainana anaty rano manankarena. Mora ny mihaona sokatra, feso.
Carlos Rosario Beach, Culebra, Puerto Rico - Mkah an'ny snorkeling. Kongo, ranomasina tropikaly, sokatra. Ary izany rehetra izany dia ao anaty rano madio indrindra.
Nosy Lady Elliot Aostralia - teboka be dia be ho an'ny snorkeling lehibe.
Smith Reef Haiti - tontolo iainana manokana. tontolo anaty tototry ny rano. Amin'ny fahavaratra dia azonao atao ny mijery taratra taratra. Amin'ny ririnina sy lohataona, dia hita eo akaikin'ny haran-dranomasina ireo trozona manafika tafondro.
Matira Beach, Bora Bora, Polinezia frantsay - Toerana mety amin'ny snorkeling. Karazan-trondro an'arivony mahery, Bibidia betsaka hafa. Ary izany rehetra izany dia ao anaty rano madio.
Rakidu, Vaavu Atoll, Maldives - ekena ho toerana fitsangatsanganana snorkeling tsara indrindra any Maldives.
Farihy jellyfish, Palau - Farihy atsinanan'ny Nosy Eil Malk. Ny karazana jellyfish roa amin'ny olona mihoatra ny roa tapitrisa, ary miaraka amin'izay dia azo antoka tanteraka Afaka milomano eo amin'izy ireo ianao, hikasika tsy hatahotra sao hanindrona izy ireo.
Nosy Palawan Filipina - Fahabetsahan'ny solontena endomika an'ny zavamaniry an-dranomasina sy ny biby. Ho fanampin'ny karazan-trondro an-jatony dia azonao atao ny mahita ny biby mampinono tsy fahita firy, ny omby an-dranomasina. Afaka mahita ranomasina sy sokatra ihany koa ianao.
Ny toerana tsara indrindra eto amin'ny planeta amin'ny fanjonoana
Fitsipika fitsipi-pifehezana fototra
Manafotra - fampianarana fiofanana
Galileo. Ny diving scuba
Misafidy sarontava snorkeling sy fantsona
Ny fitsimbina teknika
Ity karazana antsitrika ity dia mitaky fiofanana matanjaka sy tanjaka avy amin'ny mpisitrika, ary miompana amin'ny fanatontosana antsitrika kendrena toy ny fanadihadiana ny sambo-fiara. Ary ny antsitrika teknika dia ny filentehana anaty lalina noho ny 40m... Ary avy eo, mizara ho karazany, mifanaraka amin'ny lahasa sy fepetra amin'ny fampiharana azy ireo:
Famonoana ranomandry (Ice Divivng) - antsitrika ranomandry. Karazan-antsitrika mampidi-doza izay mitaky fiofanana manokana sy fitaovana manokana. Mandritra ny fidinana dia tsy maintsy misy ekipa valin'ny vonjy taitra tampoka. ny tena olana amin'ny tontolo ambanin'ny ranomandry dia ny maripana ambany (manomboka amin'ny -2 ka hatramin'ny +4), ary ny tsy fahafahan'ny fivoahana haingana eny ambonin'ny tany, ary ny fahitana voafetra noho ny tsy fisian'ny hazavana.
Fisitrihana zohy, aka lava-bato antsitrika... Anisan'izany ny fikarohana ireo lava-bato ao anaty rano. Karazan-fisitrihana anaty rano mampidi-doza tokoa. Mila fiofanana matotra tokoa izy io, ary koa fitaovana azo antoka manokana. Ny fahasarotan'ny tontolo iainana dia miavaka amin'ny tsy fisian'ny hazavana voajanahary, ny tsy fahafahan'ny fiakarana eo no ho eo ary ny maripanan'ny rano matetika.
Famoronana alahelo - Fandrobohana manondro ny fanadihadiana momba ireo zavatra nilentika. Fialam-boly mampidi-doza sy manaitaitra. Mety miovaova ny haben'ny famotopotorana ilay zavatra nilentika. Fandinihana ivelany, ary koa amin'ny fidirana an-tsehatra amin'ny ampahany na feno amin'ny tontolo iainana ambonimbony.
Toerana malaza ho an'ny fanamoriana mony
Yongala, Aostralia... - sambo mpitondra entana-metatra 110 metatra amin'ny halalin'ny 30 metatra. Nilentika tamin'ny 1911.
Jeneraly Vandenberg, Florida. - fanondrana zavakanto mba hamoronana vatohara.
Kittiwake, Nosy Cayman - Sambo tondradrano artista, mikendry ny hamorona vatohara voajanahary ao amin'ny fitahirizan-dranomasina.
Hilma Hooker, Bonaire, Karaiba - Sambo entana maina 70 metatra. Tondra-drano izy tamin'ny 1984 tamin'ny 30m ny halaliny.
Fanakanana an'i Tabarca, Flala Flala, Skotlandia - trano fisakanana tototry ny rano ao amin'ny Burra Sound mba hamoronana sakana artifisialy ho an'ny fampandrosoana ny sambon'ny fahavalo.
Liberty, Indonezia - Ny sambo amerikana entana dia miala sasatra 30m any ivelany. Toerana malaza amin'ny fisitrihana lozam-pifamoivoizana amin'ny alina.
Zenobia Ferry, Sipra - ferry 72 metatra nilentika tamin'ny 1979, 42 metatra miala ny morontsirak'i Larnaca. nisy fiara 120 tao anatiny. izay miala sasatra ao.
Cemetery Atlantika, North Carolina, Amerika - Misy tranokala mendrika 600 ka hatramin'ny 1500 eto.
Filoham-pirenena Coolidge, Vanuatu - liner goavambe goavambe navadika ho sambo miaramila, nilentika tamin'ny 1942, tafaporitsaka.
Diving an'ny teknika
Fitaovana ho an'ny teknolojia. antsitrika
Ny fitsimbina teknika. Physics.
FAQ momba ny famandrihana ara-teknika
Vondron-javatra any ambanin'ny rano. Toy ny:
Milomano mitambatra... Ao anatin'izany, ny atleta dia tsy maintsy mandeha amin'ny elanelana amin'ny ambonin'ny rano amin'ny alàlan'ny fantsom-pisefoana, ary amin'ny ilany ambanin'ny ode mampiasa serivisy scuba (fitaovana fofonaina anaty rano)
Mazava ho azy... Ny atleta dia tsy maintsy manarona ny halavirana haingana araka izay azo atao, mandresy ny sakana ary manao fanazaran-tena mifototra amin'ny fahaiza-manao antsitrika fialam-boly, toy ny fanesorana sy ny fanaovana sarontava, ny fivoahana ary ny fitafiana serivisy scuba (fitaovana fofonaina anaty rano). Rehefa tombana ny vokatra dia atao ny elanelana sy ny fahadiovan'ny fanazaran-tena.
Fahatsiarovana amin'ny alina... Ny andraikitry ny atleta, amin'ny fahitana fahitana voafetra, dia ny manangona lanja telo amin'ny hafainganam-pandeha (1 kg tsirairay), izay milahatra milahatra. Marihina fa ny fahitana voafetra dia noforonin'ny manokana lightproof sivana natao tamin'ny saron-tava.
Manangona entana. Ny tanjon'ny fifaninanana dia ny milomano haingana araka izay azo atao amin'ny vesatra enina kilao izay hita eo am-pototry ny dobo filomanosana ary atsangana ho eny amin'ny tany amin'ny fampiasana buoy manokana.
Fahatsiarovana fanatanjahantena. Ny fototra
Fanatanjahantena Eropeana Tompondakanana. antsitrika
Manangona entana. Championship. Vehivavy.
Fahatsiarovana amin'ny alina. Tompondaka eran-tany
Mazava ho azy. Tompondaka eran-tany
Ny fitsidihana matihanina
Midina ao anaty rano ny famelana aina:
Ny asa fisitrandrahana isan-karazany amin'ny karazany.
Sinema matihanina anaty sary sy sary.
Fanamboarana sy asa momba ny injeniera. Fikojakojana ny takelaka rano, tilikambo ranomasina, ary maro hafa.
Mikaroka porofo any anaty rano ao anaty rano any amin'ny polisy.
Ary mazava ho azy, ilay antsoina hoe miaramila manao savony miaraka amin'ny tanjona hanadio, sabotage, reconnaissance.
Ny fampiofanana ireo mpilatsaka an-tsitrapo ho avy dia tokony ho tanterahan'ny mpanamory matihanina ary koa ny fandaminana sy ny fampandrosoana ny fizahan-tany fizahan-tany.